Ungalibala njani ixabiso leXesha lokuPhila loMsebenzisi wakho weSoftware | Martech Zone
Sineziqalo zokuqala, iinkampani ezimiselweyo, kunye ne-analytics kunye neenkampani ezinobunkunkqele eziza kuthi zifuna uncedo lokukhulisa ishishini labo kwi-Intanethi. Nokuba ubungakanani okanye bunqabile, xa sibuza malunga nabo indleko-nganye kwaye i Ixabiso lobomi (I-LTV) yomthengi, sihlala sidibana nembonakalo engenanto. Iinkampani ezininzi kakhulu zibala uhlahlo-lwabiwo mali ngokulula:
Ngale ndlela, intengiso yomoya inyukela kwikholamu yeendleko. Kodwa ukuthengisa asiyondleko njengerente yakho… lutyalomali ekufanele ukuba lusebenzela ukukhulisa ishishini lakho. Ungahendeka ukubala ukuba indleko yokufumana umthengi omtsha sisixa esithile sedola, kwaye ke inzuzo yinzuzo oyifumeneyo kuthengo lwabo. Ingxaki yile yokuba abathengi ngokwesiqhelo abayenzi into yokuthenga. Ukufumana umthengi yeyona nto inzima, kodwa umthengi owonwabileyo akathengi nje kube kanye kwaye ashiye- bathenga ngakumbi kwaye bahlala ixesha elide.
Lithini Ixabiso leXesha lokuPhila loMthengi (CLV okanye i-CLTV) okanye Ixabiso leXesha lokuPhila (LTV)?
Ixabiso lokuphila kwabathengi (i-CLV okanye i-CLTV rhoqo), ixabiso labathengi lobomi bonke (i-LCV), okanye ixabiso lexesha lobomi (i-LTV) yinzuzo ebalwayo umthengi aya kuthi ayinike inkampani yakho. I-LTV ayikhawulelwanga kwintengiselwano okanye kwimali yonyaka, ibandakanya inzuzo ezuzwe ngexesha lobudlelwane bakho nomthengi.
Yeyiphi ifomula yokubala i-LTV?
LTV = Ixabiso leXesha lokuPhila
I-ARPU = Umyinge weRhafu ngomsebenzisi ngamnye. Ingeniso inokuvela kwiindleko zesicelo, ingeniso esekwe kubhaliso, ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo, okanye ingeniso yentengiso.
Ukutya = Ipesenti yomthengi elahlekileyo ngaphezulu kwexesha elinikiweyo. Izicelo ezisekwe kubhaliso zihlala zingenisa irhafu yonyaka, inkcitho kunye nenkcitho.
Ukuba uphuhlisa usetyenziso lweselfowuni, nantsi infographic evela kwiDot Com Infoway- Bala ixabiso leXesha loBomi (i-LTV) yaBasebenzisi bakho boSetyenziso lweMarking Massing & Impumelelo -Ibonelela ngokuhamba ngokulinganisa i-LTV yomsebenzisi wesoftware. Ikwabonelela ngeendlela ezithile zokunciphisa ubuqhetseba kunye nokunyusa inzuzo.
Akukho mathandabuzo malunga nenyaniso yokuba abantu abaninzi ngakumbi bachitha ixesha labo kwi-Intanethi kwii -apps zeselfowuni. Ngelixa oku kunokuthetha abasebenzisi abaninzi kwi-app yakho, oko akuthethi ukuba bonke abasebenzisi bakho baya kuba nenzuzo. Njengoko kuyinyani kwiimodeli ezininzi zeshishini, i-80% yengeniso ivela kubasebenzisi abangama-20%. Ukulinganisa i-LTV yabasebenzisi kunokunceda abaphuhlisi beapps ukuba banciphise abasebenzisi babo kwaye benze izibonelelo kunye nokunyusa ukuvuza ukuthembeka kwabo ukukhulisa ukugcinwa. URaja Manoharan, iDot Com Infoway
Nje ukuba uliqonde ixabiso lokuphila komthengi wakho, linganisa ireyithi yakho yokuhla, uhlalutye iindleko zokufumana umthengi, uya kuluqonda utyalo-mali olwenzayo kunye nembuyekezo ephakathi kolo tyalo-mali.
Unokwenza uhlengahlengiso kuyo nayiphi na enye okanye zonke izinto eziguquguqukayo. Kuya kufuneka ukonyuse iindleko zenkonzo yakho ukuze ugcine inzuzo esempilweni. Kuya kufuneka utyale imali eninzi kwinkonzo yabathengi ukugcina abathengi bakho ixesha elide kwaye wandise ingeniso kwi-app okanye kwixesha elide. Kuya kufuneka usebenze ukunciphisa iindleko zokufumana abathengi ngokusebenzisa izicwangciso zokuphilayo kunye nezokukhuthaza. Okanye unokufumanisa ukuba ungachitha imali ngakumbi kwizicwangciso zokufumana ezihlawulelweyo.
tags: ubalobhalaIreyithi yokuhambaI-CLTVCLVindleko ngentengo nganyeukufunyanwa kwabathengiukugcinwa kwabathengidcidot com infowayifomukubala njani i-ltvkwi-infographicltvusetyenziso lweselulausetyenziso lweselfowuni ltvintengiso yesoftwareusetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindowsyintoni i-ltv
Ngokubanzi: Umxholo woPapasho lokuHlola lwenziwe ngokuLungileyo
Iimpazamo ezi-4 zoShishino zenza ukuba i-SEO yeNgingqi ibuhlungu